यसरी बनाउनुहोस् स्वस्थकर जीवनशैली | Suvadin !
यसरी बनाउनुहोस् स्वस्थकर जीवनशैली
एजेन्सी । एक्काइसौँ शताब्दीको चरम विकाससँगै विज्ञान र प्रविधिको उपलब्धिका कारणले मानिसलाई एक पाइला हिँड्न र कुनै काम पनि आफूलाई गर्न परेको छैन । मानिसले गर्ने काम सबै मानव निर्मित यन्त्रहरूबाटै भइरहेका छन् । जसका कारण मानिस प्रविधिको दास भएको छ । खाना मीठो,चिल्लो र मसालादार खानुपर्ने,ऐस आरामको जिन्दगी बिताउनुपर्ने र कामै नगरी वा कुनै दुःख नगरी बस्नुपर्ने आजका मानिसका दैनिकि बनिरहेका छन् ।
त्यस्तै मानिसमा आएका अधिक चेतनाका कारण विकसित प्रविधिसँगै हाल सरुवा रोगहरू नियन्त्रणतर्फ गइरहेका छन् तर नसर्ने खालका दीर्घकालीन रोगहरूले मानिसलाई ग्रस्त बनाइरहेको छ । त्यसमाथि वातावरण प्रदूषणले मानिसको स्वास्थ्य अवस्थामा प्रतिकूल असर पु-याएको छ ।
सातामा ५० घण्टाभन्दा बढी काम गर्ने मानिसको कार्यक्षमतामा ह्रास आउँदै जान्छ । त्यसकारण काम र आराम दुवै एकैसाथ हुनुपर्छ । यसबाट कार्यक्षमता पनि बढ्छ भने अनेक खालका रोगहरूबाट समेत मुक्ति मिल्छ ।
यसको लागि निम्न तरिकाहरू अपनाई बिताउन सकिन्छ ।
– मनोरञ्जन : मनोविज्ञान अनुसारको मनोरञ्जन प्रदान गर्नु ।
२. खाना खाँदा परिवारसँगै बसेर घरमै खाने । परिवारसँग बसेर खाना खाँदा मीठोसँग बढी चपाएर खाने,बढी फलफूूल र तरकारी खाने,साना टुक्रा पारेर खाने,यसबाट कम खर्च हुने,परिवारसँग बसेर केही समय भए पनि कुराकानी गर्न पाउँदा आनन्द आउने ।
३. सक्रिय रहने । प्रत्येक दिन कम्तीमा १ घण्टा शारीरिक क्रियाकलाप गर्ने । यति गरे राति राम्ररी निदाउन सकिन्छ । तौल घट्न मद्दत पुग्छ,मन प्रसन्न रहन्छ । हाड,मांशपेसी,मुटु,फोक्सो स्वस्थ रहन्छ ।